Nchedo WordPress na Nche | Martech Zone
Nchedo WordPress na Nchedo
Monday, July 1, 2013 Mọnde, Febụwarị 1, 2016 Douglas Karr
Anyị na saịtị ahụ kwadoro na Flywheel na anyị bụkwa ndị mmekọ n'ihi na anyị kwenyere na ọ bụ ihe kacha mma WordPress Bochum n'elu ikpo okwu na mbara ala. N'ihi na WordPress ewu ewu, ọ na-a na-ewu ewu lekwasịrị nke hackers. Nke a apụtaghị na ọ gaghị abụrịrị ikpo okwu echedoro, agbanyeghị, ọ pụtara na ọ nwere mmasị dị mma nke onye ọrụ ọ bụla iji hụ na ha jigidere ikpo okwu ahụ, plugins ma chebe saịtị ha. Anyị kwere Flywheel mee nke a maka anyị!
WordPress bụ otu n'ime usoro nchịkwa ọdịnaya kachasị ewu ewu (CMS) iji na gburugburu 17% nke weebụsaịtị ndị dị na ịntanetị na ụbọchị ndị a na-akwado CMS a. Site na ojiji WordPress na-eto eto nchekwa na nchekwa ya abụrụla otu n'ime isi okwu iji merie. N'ime afọ 2011, etinyere ebe a na-edepụta okwu karịrị 144,000, ọnụ ọgụgụ a ruru 170,000 na afọ 2012.
WPTemplate etinyela ọnụ zuru ezu infographic nke WordPress na omume kacha mma banyere otu esi echedo ya ma nwee nchekwa.
Tags: suuruwordpress hackedwordpress nchekwanchekwa nchekwa
Ọha bụ nsogbu, ọ bụghị mgbasa ozi
WHYAnalytics: Onye na-eleta saịtị gị?